क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना गर्ने - USNEPALNEWS.COM
- यूस नेपाल न्युज संवाददाता प्रकाशित मिति: November 19, 2020
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) आयोजना गर्ने भएको छ । लिगको समय भने पछि तय गरिने छ । क्यानको बुधबार भएको भर्चुअल वार्षिक साधारणसभाले एनपिएल आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । क्यानको स्वामित्वमा रहने गरी नेपाली क्रिकेटको हितअनुकूल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नेपाल प्रिमियर लिगको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन जिम्मेवारी दिइएको क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
यस्तै क्यानको २०७०।७१ देखि २०७५। ७६ सम्मको वार्षिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनलाई वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको छ । क्यानले २०७६। ७७ को लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी एबिएस एन्ड एशोसियट्सलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
आव २०७७/७८ को कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दै अघि बढ्न सभाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । पाँचवर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गर्न तथा त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) समक्ष पेश गर्न साधारणसभाले केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिएनएन कार्यालयमा बमको चेतावनी, कार्यालय खाली गरियो
यूस नेपाल न्युज	 December 7, 2018
भोट हाल्ने कसरी ? हर्नेुहोस् यो भिडियो !
यूस नेपाल न्युज	 May 10, 2017
मुस्ताङमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चाप बढ्दै
यूस नेपाल न्युज	 May 13, 2019